Indlu esemaphandleni i-Lou Lavadou enetreyini ye-10 mzar - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni i-Lou Lavadou enetreyini ye-10 mzar
Embindini wedolophu yakudala yaseLuc-en-Provence, isitudiyo esinomtsalane esinikwe ngokhathalelo. I-10 m² ithafa enefenitshala yegadi. Jonga kumlambo kunye nakwisikwere esincinci esinomthunzi kunye nendlu yokuhlamba. Zonke izinto eziluncedo ezikufutshane. Ukuhlelwa kokhenketho olunikezelweyo 3 ***.
Ifakwe kwindlu yelali ehlaziyiweyo, indawo yokuhlala ezimeleyo inendawo engaphakathi ye-25 m2 kunye ne-10 m2 egcwele iintyatyambo egcwele ithala elijonge umlambo welali, isikwere esincinci esinomthunzi kunye nendlu yokuhlambela endala.
Indawo yokuhlala yabakhenkethi enefenitshala 3 *** (ukuhlelwa yiprefecture).
Uyilo lucwangciswe ngolu hlobo lulandelayo:
- indawo yokungena enekhabhathi yokugcina, iidrowa zezihlangu, iiracks zedyasi kunye nenqwelo yegrosari;
- ngakwesobunxele, igumbi lokuhlambela elihlotshiswe nge-Salernes faience kunye neshawa, i-sink kunye nendlu yangasese;
- ikhitshi mayixhotyiswe isitovu 4-PowerPoint, kwaye eziko, a worktop, ifriji kunye efrijini gumbi, i-onti, umatshini wokuhlamba kwaye zonke izixhobo (coffee uMenzi, iketile, ngetoaster, blender, njalo njalo)
- indawo yokutyela esekwe yiplani enkulu yebar ye-3;
- indawo yokuhlala ene-wardrobe, i-sideboard, isihlalo somlilo se-BZ esiguqulwayo (indawo eyi-1), i-TV, i-DVD player, uxhumano lwe-intanethi (i-Wi-Fi), i-fan kunye neetafile zekhofi;
- indawo yokulala ene-sofa ye-BZ eguqulwayo (indawo ezi-2 ze-160 x 200) kunye neetafile zebhedi;
- i-terrace eneentyantyambo (kuxhomekeke kwixesha!) Ngefenitshala yegadi kunye nezihlalo ezi-2 ezihleliyo zokhuni, kunye ne-parasol. Ibarbecue ayivumelekanga.
Indawo yokuhlala isembindini welali yakudala inazo zonke iivenkile ezikufutshane kwaye ikufutshane nemarike yakusasa ngoLwesihlanu. Iibha, iikhefi, iindawo zokutyela kunye nemiboniso bhanyabhanya ekufutshane. Ungazifumana iiwayini zalapha kwishishini lewayini elikwizitrato ezimbalwa kude.
I-Le Luc isembindini wogcino lwesizwe lwe-Plaine des Maures kwaye emazantsi e-Massif des Maures kunye needolophana eziphezu kweenduli (ukuhamba, ukunyuka, ukukhwela ihashe).
Indawo efanelekileyo yokujonga iVar nge:
- iilwandle e +/- 35 min (Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Fréjus and Saint-Raphaël).
- i-Estérel kunye neSainte-Baume Massifs, iNtaba yaseSainte-Victoire, iVerdon Gorges kunye nechibi laseSainte-Croix ngeyure +/- 1.
Iingcebiso malunga nokuphuma kunye nokuhamba, kunye nezikhokelo ezikhoyo.
Ibhotile ye-rose ebandayo kunye ne-tapenade enikezelwayo xa ufika.